Dowladda Masar oo liiska Argagaxisada kudartay Laacib koobab muhiim ah u qaaday dalkooda
Friday, December 14th, 2018 - 01:49:57
Thursday January 19, 2017 - 01:01:26 in Wararka by Kubad Bile
Dolwadda dalka Masar ayaa liiska Argagaxisada ku dartay xiddigii ciyaaraha isaga fariistay Mohamed Aboutrika kaasoo ay ku eedeeyeen inuu xiriir la leeyahay ururka Ikhwaanu Muslimiin (Muslim Brotherhood) oo dowladda Masar ay mamnuucday.
Taageerayaasha reer Masar ayaa flkan ka naxay waxayna sheegeen in dowladda ayqaaday talaabo aan sharci ahayn oo ka dhan ah booskii dhexe ee xulak Masar hogaaminaya in kudhaw 10 sano, kaasoo si weyn loogu tixgeliyo inuu yahay ciyaaryahanki ugu saamaynta ballaarnaa waqtiiisa.
Masar ayaa Ururka Ikhwaanu Muslimiin ku dartay ururada Argagaxisada waxayna xabisiga dhigtay kumanaan taageerayaashooda ah, waxayna xilka ka xayuubiyeen madaxweynihiigu horeeyay ee ay shacabka Masar doortaan Maxamed Mursi.
Aboutrika ayaa beeniyay inuu taageere u ahaa Ikhwaank, taasoo cadeyneysa inuu yahay nin nabadeed, basle waxaa la arkay isagoo taageerayaa madaxweynihi hore xiliii ololaha doorashada 2012.
38 jirkan ayaa ku guuleystay bilado iyo koobab badan oo muhiim ah oo isugu jira heer koox iyo mid qaran.
Aboutrika ayaa hadda kusugan dalka Gabon halkaas uu tabiye ka yahay ciyaaraha kubadda cagta ee qaramada Afrika, waxuu Abuukaatahiisa sheegay in
uu dalkiisa ku laabanayo isla markaana ay Afcan ka qeyb qaadanayaan go'aanka maxkamadda Dambiyada ee Qaahira.